Tevedza neWordPress Munyori neGoogle Analytics
Kuteedzera Akawanda WordPress Vanyori neGoogle Analytics
Muvhuro, Kukadzi 8, 2010 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Douglas Karr
Ini ndakanyora imwe posvo yekuti ungateedzera sei vanyori vakawanda muWordPress neGoogle Analytics zvakamboitika, asi zvakakanganisa! Kunze kweiyo WordPress Loop, haugone kutora mazita emunyori saka kodhi haina kushanda.
Ndine urombo nekutadza.
Ini ndamboita imwe yekuchera nekuchera ndikaona maitiro ekuzviita nenjere nemazhinji Google Analytics profiles. (Chokwadi chaizvo - ndipo paunosvika pakuda hunyanzvi analytics mapakeji senge Webtrends!)
Nhanho 1: Wedzera iyo Mbiri kune Iripo Domain
Nhanho yekutanga ndeyekuwedzera imwe nhoroondo kudunhu rako razvino. Iyi sarudzo iyo vanhu vazhinji vasingazive nezvayo asi inoshanda zvakakwana kune iyi mhando yechiitiko.
Nhanho 2: Wedzera iyo Sanganisira Firita kune Nyowani Munyori Mbiri
Iwe uchazoda chete kuyera peji maonero akateedzerwa nevanyori mune ino purogiramu, saka wedzera firita yeiyo subdirectory / munyori /. Imwe katsamba pane izvi - ndaifanira kugadzira "izvo zvine" seanoshanda. Mirayiridzo yeGoogle inodaidzira a ^ pamberi pefaira. Muchokwadi, haugone kunyora ... mumunda!
Nhanho 3: Wedzera iyo Bvisa Firita kune yako Yekutanga Mbiri
Iwe haudi kuda kunyatso tarisa ese ekuwedzera mapeji ekuona nemunyori muPurofesa yako yekutanga, saka wedzera firita kune yako yekutanga nhoroondo kusabvisa iyo subdirectory / nemunyori /.
Nhanho 4: Wedzera chiRoop muiyo Footer script
Mukati meyako iripo Google Analytics yekutevera uye pazasi yazvino trackPageView mutsara, wedzera chinotevera chiuno mune rako tsoka tsoka faira:
var munyoriTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); munyoriTracker._trackPageview ("/ na-munyori / ");
Izvi zvinotora zvese zvako zvekutevera, nemunyori, mune yechipiri nhoroondo yedomain yako. Nekusabvisa iyi yekutevera kubva kune yako yekutanga profile, iwe haawedzere kuwedzeredza zvisina basa peji rekutarisa. Ramba uchifunga kuti kana iwe uine peji repamba rine matanhatu maposita, iwe unoteedzera matanhatu mapeji ekuongorora nekodhi iyi - imwe yeimwe posvo, inoteverwa nemunyori.
Heano maratidziro anozoitwa neMunyori Kuongorora mune iyo chaiyo profil.
Kana iwe waita izvi neimwe nzira, ini ndakavhurika kune dzimwe nzira dzekutevera ruzivo rwemunyori! Sezvo yangu Adsense mari inosanganisirwa neprofile, ini ndinogona kutoona ndevapi vanyori vari kugadzira yakanyanya kushambadzira mari :).
Tags: munyorimunyori achiteedzeragoogle analytics
Vanogona Kutengesa Vanorova Goridhe paFacebook?
Kukadzi 8, 2010 na3: 16 PM
Yakanaka post Doug! Imwe nzira yekutevera Vanyori padanho iri ndeye chiitiko chekutevera muGA. Iwe unogona kuwana kuverenga kwekuti kangani nguva imwe neimwe yevanyori vako zvakatumirwa, mune imwecheteyo mbiri seyakajairika data, pasina inflating peji rekutarisa. Zvakare, iwe unogona kushandisa zviyero zvakawandisa mune Chiitiko kushuma kuti uone zvipi zviwanikwa zvaive zvichichaira vashanyi kune vakasiyana vanyori (semuenzaniso ndiani ari kukwezva vaverengi vazhinji kuburikidza neTwitter), kwavari kubva, nezvimwewo ini ndakaedza kutumira script, asi ini yaive pamusoro pehunhu hunhu. Hechino chinongedzo: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
Doug, iwe unogara uchiita kunge unoisa chakakodzera posvo panguva yakakodzera, ini ndichaita izvi pane yedu Indiana Insider blog (http://www.VisitIndiana.com/blog/) nhasi!
Yangu Saiti (tinya kuti edit)
Mar 6, 2010 pa 2: 19 AM
Zvinotyisa, ndatenda nekugovana iyi Doug! Ndiri kuona kuti iyo_author () inoda kutsiviwa ne get_the_author () kuitira kudzivirira zita remunyori kudzokororwa uye kuburitswa kaviri.
Zvakare, yako mhinduro inofananidzwa sei neyaAdamu?
Ndira 27, 2011 na7: 32 PM
Doug, ndakaedza kuita izvi, asi kungo tarisa maonero eayo chaiwo mapeji emunyori (… / munyori / AUTHORNAME), uye kwete maonero epositi yega yega akaonekwa, akapatsanurwa nemunyori - chero mifungo?
Ndira 27, 2011 na7: 42 PM
Maitiro andakaita izvi ainyatso kushandisa maakaundi maviri akasiyana mukati meGoogle Analytics (akaparadzaniswa macodhi eUA). Ini ndinodana imwe account "Munyori" uye imwe yacho ini yandinochengeta senzvimbo yese. Zvine musoro?
Ndira 27, 2011 na7: 46 PM
Oo, maviri akasiyana UA kodhi? Ini ndangomisa mbiri nyowani pasi peblog blog UA kodhi. Ini ndichapa iye iye pfuti uye ndichakuzivisa iwe kana zvichindishandira.
Jun 25, 2012 pa 2: 15 PM
Ndatenda zvikuru. Ndiri kuedza izvi izvozvi. Chinhu chimwe chete hazvo, ini ndakabvisa "echo" kunze kwechiuno nekuti yaiita kunge iri kuteedzera zita remunyori. Semuenzaniso / nemunyori / Munyori ZitaZita reMunyori raioneka neiyo echo.
Gumiguru 12, 2014 na4: 23 PM
Kutenda dzidziso. Ini ndinofanirwa kuteedzera iwo anotarisisa pamapeji munyori wega wega pane blog blog inounganidza kuti uvabhadhare nemaonero.
Kusanganisira iyo peji reimba hakunyatsoshanda, zvakadaro.
Unogona here kungoisa kodhi kubva papeji rekutanga? Kana iyo kodhi yakaiswa chete mune imwechete-peji marongero (sarudzo pane yakasarudzika mapeji ewebhu), zvaizoshanda here? kusasanganisa maonero epamusha kubva pakuverenga?
Gumiguru 12, 2014 na4: 49 PM
Isu tanga tichinyatso kushandisa Chirevo.ly yeizvozvo uye iri kushanda mushe.
May 16, 2015 pa 8: 54 PM
Unoita sei nhanho yekutanga ndapota: "wedzera imwe nhoroondo kudunhu rako razvino"
Iwe unoratidza maitiro ekupedzisa nhanho, asi kwete kuti ungasvika sei pakutanga.
May 17, 2015 pa 9: 28 PM
Ivo zvechokwadi havaite kuti zvive nyore, kuna ivo Justin? Heino pfupiso pane iyo Google Analytics peji.